Benchtop အမျိုးအစား Erbium-doped Fiber In-Line Amplifier ထုတ်လုပ်သူများနှင့်ပေးသွင်းသူများ - Box Optronics
နေအိမ် > ထုတ်ကုန်များ > Fiber Optic module တွေ > ဖိုင်ဘာ Amplifier module တွေ > Benchtop အမျိုးအစား Erbium-doped Fiber In-Line Amplifier
Benchtop အမျိုးအစား Erbium-doped Fiber In-Line Amplifier
Benchtop အမျိုးအစား Erbium-doped Fiber In-Line Amplifier သည် PA amplifier နှင့် BA amplifier တို့၏ကောင်းကျိုးများကိုမြင့်မားစွာရရှိခြင်း၊ မြင့်မားစွာထုတ်လွှင့်နိုင်စွမ်းနှင့်ဆူညံသံအတော်လေးနိမ့်ကျမှုများနှင့်ပေါင်းစပ်ထားသည်။
၁။ Benchtop အမျိုးအစား Erbium-doped Fiber In-Line Amplifier ကိုမိတ်ဆက်
Line amplifier (LA) ဆိုသည်မှာ fiber laser သို့မဟုတ် fiber communication system တွင်လိုင်း relay ကိုရည်စူးထားသော optical power amplifier ထုတ်ကုန်တစ်ခုဖြစ်သည်။ PA amplifier နှင့် BA amplifier တို့၏အားသာချက်များကိုပေါင်းစပ်ထားသည်။ မြင့်မားသောအမြတ်၊ မြင့်မားသောထုတ်လွှင့်နိုင်စွမ်းနှင့်ဆူညံသံနည်းပါးခြင်းတို့နှင့်အတူ။ Optical fiber segments များအကြား relay length တိုးမြှင့်ခြင်း (သို့) branch access network အတွတ်သက်ဆိုင်တဲ့ single-point တစ်ခုအတွတ် branch ဆုံးရှုံးမှုများကိုအစားထိုးပေးဖို့၊
၂။ Benchtop အမျိုးအစား Erbium-doped Fiber In-Line Amplifier အမျိုးအစား
မြင့်မားသော output ကိုပါဝါ။
၃။ Benchtop အမျိုးအစား Erbium-doped Fiber In-Line Amplifier ကိုအသုံးပြုခြင်း
4. Benchtop အမျိုးအစား Erbium-doped Fiber In-Line Amplifier ၏ Optical-Electrical လက္ခဏာ
လှိုင်းအလျား operating nm 1530 ~ 1565 C-band
သွင်းအားစု dBm -25 ~ -3
Saturation output ကိုပါဝါ dBm 13/17/23/25/26 @ -10dBm input ကို
အသေးစား signal ကိုအမြတ်ကိန်း dB 35 @ -25dBm input ကို
ဆူညံသံပုံ dB 5.5 @ -10dBm input ကို
polarization ကိုမှီခိုအမြတ် dB 0.5
5VDC <15W အပိုင်း
5. Benchtop အမျိုးအစား Erbium-doped Fiber In-Line Amplifier ကိုဖြန့်ဝေခြင်း၊ ပို့ခြင်းနှင့်အမှုဆောင်ခြင်း
hot Tags:: Benchtop အမျိုးအစား Erbium-doped Fiber In-Line Amplifier, ထုတ်လုပ်သူများ, ပေးသွင်းသူများ, လက်ကား, စက်ရုံ, စိတ်ကြိုက်, Bulk, တရုတ်, တရုတ်လုပ်, စျေးပေါ, အနိမ့်စျေး, အရည်အသွေး